The ecosystem of the Forêt Du Day waa qulqulo dabiici ah oo Afromontan ah oo qallalan oo ku yaalla buuraha Goda Massif ee Waqooyiga Jabuuti iyada oo leh qiyaas balaadhan oo u dhexeeya c. 1200 m ilaa c. 1750 m oo waa Goob muhiim ah oo BirdLife ah (BirdLife International, 2000). Waxay kaloo ka kooban tahay mid ka mid ah dhulalka qoryaha yar ee weli ku haray dalka, halkaas oo taariikh ahaan, geedkii kaynta ku tiirsanaa ahaa qoryaha qoryaha qoryaha Afrika ee Juniperus, taas oo abuurtay kayn ah xayawaan xiran illaa uu hoos u dhac ku yimid 20-30 sano ee ugu dambeeyay oo ka tagay saamiga dadka juunyeerka dhintay ama dhimanaya, iyo dhismaha furan (Bealey et al., 2006).
Goobaha sare, dabaqa hoostiisa wuxuu ka kooban yahay Buxus hildebrandtii, inta uu ka baxsan yahay meelaha hoose iyo meelaha hoose waa nooca Acacia seyal, Acacia etbaica iyo Acacia mellifera. Duqa weyn ee Ficus sp. wuxuu dhacaa inta badan. Ka sarreeya taarikada qashinka ah ee sarreeya ee sareeya waa xayndaabka basalt baaxad leh oo leh geedo kala firidhsan oo ay ku jiraan badan oo Euphorbia sp. Waxaa jira dooxooyin leh biyo joogto ah oo furan oo ku yaal aagag badan, deegaan la jeclaystay oo ka mid ah bangiga dhexe ee nugul ee Bankoualé palm Livistona carinensis.
waa guriga ilaa 70% dhulalka ku salaysan bayoolajiga. Nidaamka dhul-beereedkan waxaa loo tixgeliyaa in si gooni gooni ah loogu soo koobay hawdka orodka Itoobiya ee Montane; Ecozone, oo ah jasiiradda muhiimka ah ee kaynta ku jirta lamadegaanka semi-jiir.
Marka laga eego habka deegaanka ee muhiimadda caalamiga ah iyo kan qaranka, Forêt Du Day waa guriga ilaa 70% dhulalka kala duwan ee bayoolojiga ah oo martigeliya noocyo kala duwan oo aad u yar, oo aad u adag oo la isku haleyn karo oo adduunka oo dhan loo hanjabay sida Francistin, Leopard, Dragon iyo Livistona geedaha. Dheeraad ah ayaa ka badbaaday qarniyo badan iyada oo loo eegayo kala duwanaanshaha bayoolojiga ah hidaha iyo kaydka muhiimka ah ee dabiiciga ah si ay u quudiyaan iyo uga qaybqaataan hab nololeedka bulshada ku nool dhul-beereed heer sare ah oo ku yaal aagagga dhul-beereedka Jabuuti.
Dheeraad ah, Forêt du Day, warshad qallalan, oo ah dabiiciga kaynta qadiimka ah, waxay ku jirtaa xaalad liidata iyada oo qaybo badan oo geedo ah dhintay ama dhimanayaan. Waxyaabaha kale ee quseeya waxaa ka mid ah ururinta qoryaha oo ku yaalla meelaha yaryar, ugaadhsiga iyo khalkhalka dadka. Qeyb ka mid ah Forêt du Day ayaa lagu dhawaaqay Qaran Qaran 1939 iyo aag cusub oo dhowaan la ilaaliyo, laakiin magacaabistu mar dambe ma soconayso ka hor wakhtigan xaadirka ah (Xukuumada 2004). Marka laga soo tago muhiimadda kala duwan ee bayolojiga, Forêt du Day Ecosystem waxay bixisaa khayraadka dabiiciga ah (qoryaha dabka, daaqsinka daaqa) iyo adeegyada deegaanka (biyaha, xakamaynta xakamaynta) taas oo muhiim u ah nolol-maalmeedka deegaanka. Deegaanka dabiiciga ah ee sii xumaanaya ayaa walaac ku haya dadka maxalliga ah.
Sababaha xaaladaha saboolka ah ee geedaha juniperka ah ee Forêt du Day ma cadda, laakiin ka weynaaday lo’da, geela iyo riyaha, ayaa ah arrin muhiim ah, oo laga yaabo inay sii xumaato roobabkii aaladda, isbedelka cimilada iyo cudurrada fangas oo aan lahayn caddayn cilmi-baarista ah. Khataraha kale waxaa ka mid ah ururinta dabka, ugaadhsiga iyo khalkhalka dadka. Inkasta oo noocyada ‘ecology iyo biology ay sidoo kale liidan yihiin iyo dabeecadeeda joogtada ah ee ay ku dhacaan geedaha dabiiciga ah ee dhintay iyo kuwo aad u liita ayaa weli caddaalad u ah badbaadada muddada dheer.